“the beginning of the end of Farmajo’s presidency”
Sida aan ka dhaxalnay tan iyo burburkii Dowladii Soomaaliya ee 1991, waxaa dowlad kasta oo la sameeyaba hareerayn jiray khilaafaad dhexmara Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha ama Fulinta (Dowlada) iyo Sharci-dejinta (Baarlmaanka). Waxaa kaloo caado ahayd in Madaxweyne kasta inta uu xilka hayo ugu yaraan 3 Ra’iisal Wasaare isku bedeli jiray. Hase yeeshee, tan iyo intii uu xilka qabtay Madaxweyne Farmaajo waxaa jiray jawi wada shaqayneed iyo kalsooni kaas oo ka dhexeeyay isaga iyo Ra’iisal Wasaare Kheyre oo ahaa Ra’iisal Wasaaraha keliya ee aad moodid inuu mudadiisii ku dhamaysan doono khilaaf yari. Waxaa kaloo iyaduna caado noqotay in Ra’iisal Wasaare kasta kolka xiliga doorashu soo dhawaato uu geli jirtay han ah inuu Madaxweynihii magacaabay xilka kula tartamo. Tusaale ahaan, Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Gaas wuxuu xilka kula tartamay Madaxweyne Shariif oo uu markaasi dowladiisa ka tirsanaa, Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid oo isaguna la tartamay Madaxweyne Xassan Sheekh oo uu dowladii ka tirsanaa.
1. In Khayre iyo Farmaajo kala xarig furteen, RW Khayre uu yahay musharax u soo xayd-xaydtay siduu sumcad usii dhisan lahaa, kalsoonina bulshada u heli lahaa
Waxaa intaa uga sii daran hadal dhiiranaanta Madaxweyne Waare (oo ahaa masuul dhaqaale Federaal lagu dhisay , lagana filayay inuu Villa Somalia loyal u noqdo) kaas cod dheer ku yiri yeeli mayno wax kasta oo dhinac maraya dastuurka dalka isagoo ula jeeda qaabka Farmaajo wax ku wado. Dhinaca kale Madaxweyne Qoor-qoor (oo xilka ku hantay dhaqaaale Federaalka, lana filayay inuu loyal u noqdo Villa Somalia) ayaad moodaa inuu nabar iyo naxdin ku noqday Villa Somalia maadaama uu isku hareereeyay xubnihii ugu mucaaradsanaa dowlada Farmaajo, maantana uu yahay odayga dhigay gogosha wada hadalka, waxaa intaa ka sii daran Madaxweyne Lafta-Gareen oo Farmaajo si gaar ah isugu halaynayay uu isaguna ka biyo diiday hanaanka doorasho. Madaxweyne Axmed Madoobe oo isaga dagaal af, mid siyaasadeed iyo mid ciidanba Farmaajo horay ugu qaaday ayaad moodaa inuu maanta ku dhex dhaantaynayo Dhuusa-Mareeb, halka Madaxweyne Denina uu falfaliir iyo fuud yicibeed isla dhacayo.
Isku soo duuboo, waxaad moodaa in isbedel siyaasadeed oo xowli u socda uu dhacay sadexdii casho ee la soo dhaafay, iyadoo la filayo in Khayre safar ku tago Dhuusa-Mareeb dhawaan, lana soo xaajoodo waxna la soo meel dhigo dowlada xubnaha ka ah Federaalka. Su’aasha isweydiinta mudani waxay tahay muxuu noqon doona fal-celinta Farmaajo, ma siduu hadaba isku dhiibay oo hadalkii Khayre ee ka nixiyay iyo go’aankii gollaha wasiirada oo kale ayuu ayidi doonaa waxa RW Khayre iyo Madaxda ku shiraysa Dhuusa-mareeb iska soo meel dhigaan mise wuu ka hor iman doonaa? Haduu ka horyimaado, malaga yaabaa sidii Madaxweyne Sheekh Shariif shirkii Uganda in Ra’iisal Wasaaraha la siiyo awood buuxda oo uu dalka ku badbaadiyo.